tokana fandroana faucet lavaka mainty
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana finday / WOWOW Faucets milentika visy Matte Mainty
Matte Black Bathroom Faucet dia manolotra anao endrika sy kalitao tokana. Mahavariana ilay fampisehoana ary
fomba kanto manaitra. Vidio ny palitao mainty matte mainty izao!
2321501B torolàlana fametrahana
Matte fandroana mainty Matte 2321501B
Tetikasa mahasoa ny famolavolana ny efitrano fandroana. Na dia tsy mandany fotoana be ao amin'ny efitrano fidiovanao aza ianao, dia azonao atao koa ny mampiasa io toerana io mba fialan-tsasatra mandritra ny fotoana lava, ohatra eo amin'ny whirlpool. Na izany na tsy izany, dia tsy tokony hohamaivaninao mihitsy ny fiantraikan'ny fanamboarana efitra fandroana. Izy io dia tokony ho ampahany amin'ny famolavolana amin'ny ankohonanao ary mendrika ny fotoana hieritreretanao azy tsara momba ny famolavolana sy ny fampiharana.
Ny efitrano fandroana iray dia tokony hanome anao mandanjalanja ny endriny sy ny fampiasa. Ny fampandehanana dia manana ny lanjany lehibe indrindra, toy ny ankamaroan'ny fotoana dia maniry ny fampiasana ny fiasa fototra ao amin'ny efitrano fidianao ianao. Ohatra, mandro ianao ary mikosoka ny nifinao, rehefa maika ny maraina. Amin'ny lafiny iray, indrindra rehefa ao anatin'ny fisaintsainana somary milamina kokoa ianao dia afaka mahazo fahafinaretana amin'ny famoahana mandro, miala sasatra ao amin'ny trano fandroana anao. Ny zavatra tsara amin'ny famoahana trano fandroana dia ny fametrahanao ny famoronana rehetra ao aminy. Misy safidy an-tapitrisany maro amin'ny famolavolana efitra fandroana, ary na inona na inona manapa-kevitra ianao dia hanana haingo tokana izay tsy ananan'ny olon-kafa. Ary ianao irery no mpamorona azy. Afaka mahazo fitaomam-panahy amin'ny alàlan'ny gazety sy tranokala ianao, saingy amin'ny farany ianao no manapa-kevitra ny ho tahaka ny efitrano fandroana.
Tavokely fandroana tokana amin'ny mainty
Rehefa mamolavola ny efitrano fidianao mety ianao, dia tsy tokony hohamaivaninao mihitsy ny fiantraikan'ireo faucets ao amin'ny efitrano fandroana. Satria ny faucaux fandroana dia teboka voajanahary misy ny efitra fandroana, ny olona dia mijery hatrany ny fauzinao amin'ny voalohany. Noho izany dia tokony ho safidinao foana ny faucets fandroana. Ankoatra ny fiasa, tianao ny fampidinana ao amin'ny efitrano fandroanao ary manasongadina fomba iray izay reharehanao. Midika izany fa tsy tokony hiala amin'ny safidy ho an'ny karazana fandroana fandroana mandra-pahatongan'ny farany ianao rehefa mamorona ny efitrano fidiovana. Tokony ho efa lasa ampahany manan-danja amin'ny fanamboarana jiro ho anao ianao.
Momba ny fandroana amin'ny efitrano fandroana an-dakozia dia afaka misafidy karazana faucets milentika mandro ianao. Azonao atao ny misafidy faucets doble azo tanterahana na faucets fandroana tokana. Ny faucets fandroana tokana dia fantatra koa fa faucets efitra fandroana tokana. Ny tombony lehibe amin'ny faucets fandroana tokana dia ny hahafahanao mifehy ny mari-pana amin'ny rano amin'ny tanana iray. Ny tombony iray hafa dia ny fanamorana ny fametrahana. Satria mila lavaka iray fotsiny ianao, dia tsara ny mametraka faucet mandro tokana. Ny faucaux fandroana tokana dia tonga amin'ny karazany sy volavola rehetra. Ny matrokan'ny efitra fandroana mainty matotra an'ny WOWOW dia manolotra anao endrika kanto izay mitovy amin'ny gooseneck amin'ny loko marevaka sy tsy manam-paharoa.
Fitaovana fandroana mainty matotra sy matanjaka
Tsotra sy tsy misy vaniny ny akanjo marevaka matanjaka mainty sy malefaka matotra an'ny WOWOW. Natao tamim-pitandremana ny santimetan'ny fitaovana fandroana faran'izay tsara tao anatiny, mba hanoherana izay mety hihoatra na goroka. Noho izany dia azo atao foana ny manasa sy mitazona io poketra mainty matte mainty io mba hitazomana hatrany endrika. Ny takelaka mainty manara-penitra dia ahitana ny faritry ny efitrano fandroana miaraka amin'ny endrika maoderina izay hamolavola singa tsy misy dikany amin'ny efitra fandroana famolavolana. Ankoatr'izay dia afaka mahita faucets fandroana mitovy endrika ho an'ny fandroana sy fandroana ianao, ohatra, mba hamolavolana ampahany manimba amin'ny efitra fandroana.
Ny faucaux fandroana mainty avo dia manana ny silhouette gooseneck mahomby 5.8 santimetatra. Ny fandroana amin'ny efitrano fandroana dia afaka manatratra ny fanasana mahomby. Ny rano mandeha dia malama sy maharitra. Ankoatr'izay, ity spout avo lenta ity dia anti-splatter, ka tsy hando ny akanjonao ianao rehefa manasa ny tenanao any amin'ny fandroana fandroana. Amin'ny farany, tsy mila manitatra ny tànanao hitrandraka rano ianao, satria ny famolavolana gooseneck vaovao dia manome rano anao izay ilainao. Mba hamenoana ny volanao dia ho hitanao ny kitapom-pahalalana am-pilalaovana tafiditra ao anaty fandroana fandroana.
Matte lamba fandroana mainty dia tsara kalitao
WOWOW dia mampiasa ny fitaovana tsara indrindra amin'ny faucet amin'ny efitrano fandroana azy. Ny fitaovam-pamokarana ho an'ny asa-kanto no manome antoka tsara ny fepetra sy ny fampandanjanana ireo singa rehetra ao aminy. Ny jiro fandroana an'ny WOWOW noho izany dia singa iray manan-danja amin'ny vondron-javatra natao ho an'ny fampisehoana farany. Tsy misy na inona na inona ity vokatra ity dia mifanentana amin'ny fametrahana stainless vy amerikanina Conventional. Ny fantsom-bolam-bary maimaim-poana amin'ny kamory mainty matotra WOWOW dia nofehezina mafy. Ny fandalinana dia mampiseho fa ny kapila varahina tsy misy fotaka dia mbola mivezivezy foana aorian'ny fanodinana 500,000.
Ny valin'ny lefon'ny WOWOW matte mainty palitao dia mora apetraka. Azonao atao ny mifehy mora foana ny mari-pana ny rano ary manolotra fikosoham-bava ampy mba hifehezana ny mari-pana tsy mihetsika. Ankoatr'izay, ny faucite fandroana mainty matte dia manana fahatsarana hatsaraina satria ny vatana faucet dia namboarina avy amin'ny varahina matevina nitambatra tamin'ny singa manana kalitao avo lenta. Rehefa mitazona izany tavoahangy fandroana mainty matotra WOWOW ianao ity dia tsikaritrareo avy hatrany ny kalitao omeny.
Vidiny marcaux fandroana mainty matotra lafo be
Mampiasa fitaovana kalitao avo dia tsara, afaka manolotra anao ity gropy mainty matte mainty ity ny WOWOW. NY WOW aloha aloha no mahalala hoe aiza ny fividianana fitaovana manta amin'ny vidiny mirary. Faharoa, ny trano famokarana maoderina miaraka amin'ny WOWOW dia manome antoka ny fizotran'ny famokarana lafo vidy. Amin'izany fomba izany no ahazoanao tombony amin'ireto tombony ireto ary omena antoka amin'ny kiraro mainty matte mainty matte tsara tarehy miaraka amin'ny marika faran'izay tsara indrindra. Rehefa mividy mofomamy fandroana mainty WOWOW matte ianao dia hahazo izay rehetra ilainao amin'ny fametahana moramora fandroana mainty ity. Ankoatra ny fantsom-panafody masinina, misy escutcheon feno ho an'ny fametrahana lavaka 1 na 3 koa. Ho hitanao ny fifandraisana rano ilaina mba hanamora ny fametrahana azy mora. Ny faucaux fandroana rehetra an'ny WOWOW dia tonga amin'ny vanimpotoana 5 taona feno, antoka iray averina 90 andro ary fandefasana maimaim-poana iraisam-pirenena!
Ny tombony azo avy amin'ny boaty fandroana mainty matte amin'ny fomba fohy
 loko mainty mampientanentana
 Ny famoronana maoderina maoderina
 Manjary mitambatra amin'ireo faucite fandroana mainty matte hafa
SKU: 2321501B Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana finday Tags: lovia deck, lavanila vita, sambo nilentika
23.5 X 11.7 X 3 santimetatra